China Phlogopite mica powder ifektri kanye nabaphakeli | I-Huajing
I-Huajing plastic-grade mica powder, esetshenziselwa ikakhulukazi amapulasitiki obunjiniyela ukukhulisa i-module yokugoba nokuguquguquka; Ukunciphisa ukuncipha .Emkhakheni wezesekeli zepulasitiki zemikhiqizo ye-elekthronikhi, ngemuva kokungeza i-mica, zingaba nenhlanganisela ecwengeke kakhudlwana nedizayini.
Plastic Ibanga Mica Powder
Sice Umbala Mhlophe (Lab) Particle Usayizi (μm) Ukuhlanzeka (%) Izinto Magnetic (PPM) Umswakama （%） I-LOI (650 ℃) I-Ph Osbestos Heavy Metal Uphiko Idenisty yenqwaba (g / cm3)
G-100 UBrown —— 120 ＞ 99 ＜ 500 ＜ 0.6 2 ～ 3 7.8 Cha / 0.26
G-200 UBrown —— 70 ＞ 99 ＜ 500 ＜ 0.6 2 ～ 3 7.8 Cha / 0.26
G-325 UBrown —— 53 ＞ 99 ＜ 500 ＜ 0.6 2 ～ 3 7.8 Cha / 0.22
G-400 UBrown —— 45 ＞ 99 ＜ 500 ＜ 0.6 2 ～ 3 7.8 Cha / 0.20
Izakhiwo zomzimba zeMuscovite nePhlogopite
Into Muscovite I-Phlogopite
Umbala umbala ongenambala, onsundu, ombala opinki, oluhlaza okotshani i-claybank, nsundu green okuluhlaza okungajulile 、 okumnyama
Ukubonisa ngale% 23 - 87.5 0-25.2
Inkanyiso isicwebezelisi sengilazi, amaparele nosilika Ukubengezela kwengilazi, eduze kwenkazimulo yensimbi, ukucwebezela kwegrisi
Isicwebezelisi 13.5 ~ 51.0 13.2 ~ 14.7
Ubulukhuni be-Morse 2 ~ 3 2.5 ~ 3
Izindlela / izindlela ze-Attenuatedoscillator 113 ~ 190 68 ~ 132
Ubuningi (g / cm2) 2.7 ~ 2.9 2.3 ~ 3.0
Ukuncibilika / c 1260 ~ 1290 1270 ~ 1330
Umthamo wokushisa / J / K. 0.205 ~ 0.208 0.206
Ukuqhuba kwe-Thermal / w / mk 0.0010 ~ 0.0016 0.010 ~ 0.016
I-coefficient enhle (kg / cm2) 15050 ~ 21340 14220 ~ 19110
Amandla we-dielectric / (kv / mm) we-0.02mm ishidi elijiyile 160 128
I-Huajing plastic-grade mica powder, esetshenziselwa ikakhulukazi amapulasitiki obunjiniyela ukukhulisa i-module yokugoba nokuguquguquka; Ukunciphisa ukuncipha .Emkhakheni wezesekeli zepulasitiki zemikhiqizo ye-elekthronikhi, ngemuva kokungeza i-mica, zingaba nenhlanganisela ecwengeke kakhudlwana nedizayini. ingathuthukisa ukumelana nesimo sezulu kwemikhiqizo yepulasitiki, ukuze amapulasitiki obunjiniyela akwazi ukumelana nokushisa okukhulu nokwehluka kwemvelo; ithuthukisa kakhulu ukwahlukanisa ukuqinisekisa ukuthembeka kokusebenza kwamandla kagesi aphezulu; Kungakhuphula ukuswakama kwemikhiqizo ethile ethile yepulasitiki futhi.
Igolide mica imvamisa iphuzi, nsundu, nsundu noma imnyama; ingilazi ecwebezelayo, indawo yokuhlanjululwa iparele noma i-luster semi-metallic. Ukusobala kwe-Muscovite kungu-71.7-87.5%, nokuthi kwe-phlogopite kungu-0-25.2%. Ubulukhuni bukaMohs beMuscovite bungu-2-2.5 kanti obuka-phlogopite bungu-2.78-2.85.
Ukunwebeka nobuso beMuscovite abuguquki lapho bufudunyezwa ku-100,600C, kepha ukuphelelwa amandla kwamanzi, izakhiwo zomshini nezikagesi kuyashintsha ngemuva kuka-700C, ukuqina kuyalahleka futhi kube brittle, futhi isakhiwo sichithwa ngo-1050 ° C. lapho i-Muscovite icishe ibe ngu-700C, ukusebenza kukagesi kungcono kune-Muscovite.
Ngakho-ke, i-mica yegolide isetshenziswa kuma-plastiki angenazo izidingo eziphezulu zombala kepha ukumelana nokushisa okuphezulu.
Ukusetshenziswa kweMica ku-PA
I-PA inamandla omthelela ophansi kanye ne-absorptivity ephezulu emazingeni okushisa owomile naphansi, okuthinta ukuzinza kwayo kobukhulu kanye nezakhiwo zikagesi. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuguqula ukushiyeka kwe-PA ngenhloso.
I-Mica i-filler enhle kakhulu engajwayelekile yamapulasitiki, enezici zokumelana kahle kwesimo sezulu, ukumelana nokushisa, ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali, ukuqina, ukufakwa kukagesi nokunye. Inesakhiwo esintekenteke futhi ingakhulisa i-PA ngobukhulu obubili. Ngemuva kokuguqulwa kwendawo, i-mica yengezwe ku-PA resin, izakhiwo zemishini nokuqina kokushisa kushintshiwe kakhulu, ukuncipha kokubumba nakho kwathuthukiswa kakhulu, futhi izindleko zokukhiqiza zehliswa kakhulu.
Langaphambilini I-mica yomhlabathi owomile
Olandelayo: Zokwenziwa mica powder
Enemthombo Ibanga Phlogopite Mica Powder